110 Milyan Euro Deyn oo Deutsche Bank ah oo loogu talagalay Sultanbeyli Çekmeköy Subway | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul110 Milyan Euro Deyn oo Deutsche Bank ah oo loogu talagalay Sultanbeyli Çekmeköy Subway
25 / 11 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
milyan yuro deyn ah deutsche bank for sultanbeyli cekmekoy tareenka dhulka hoostiisa
110 Milyan Euro Deyn oo Deutsche Bank ah oo loogu talagalay Sultanbeyli Çekmeköy Subway; Imamoglu, Madaxweynaha IMM, wuxuu sheegay inay sameeyeen koox ku dhow 20, gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha Ataturk iyo mashruuca Channel Istanbul. Imamoglu, "IMM dib uma ciyaari karo daanyeerka 3 ma ciyaari karo," ayuu yidhi. Imamoglu wuxuu kaloo shaaca ka qaaday in degmadu ku leedahay lacag dhan 28 bilyan ginni
Duqa Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu ayaa ka hadlay natiijada booqashadiisa Paris, Copenhagen, Strasbourg, Berlin iyo London. Imamoglu ayaa ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta shir jaraaid.
Badanaa Yurub, wuxuu yiri, nasıl Sideed u tahay xiriirkaaga dowladda dhexe? Hortaada ma jiraa wax carqalad ku jira ... Imamoglu oo sheegaya in su'aashan la hagaajiyay, ayaa yiri: dabcan waxaan aaminsanahay in xiriiradaas ay caadi noqon doonaan oo ay caadi noqon doonaan.
KHATARAHA BANKKA QALBIGA
"Maalgelinno badan, gaar ahaan mashruuca metroolka '8 metro' ee Magaalada Istanbul, ayaa ku dhacay, si kastaba ha noqotee, baahiyadooda dhaqaale awgeed, 2 waxay joogsatay sannado. Nasiib darrose, albaabka baananka dowladdu waa inoo xiran yihiin. Waxaan dhaleeceynayaa howl wadeenada ka xanuunsada haynta maskaxda. Waan dulqaad badnaa bilo 5, laakiin markan waan cambaareynayaa. Jawaabta wanaagsan ee laga helo bangiyada gaarka loo leeyahay aad ayey u badan yihiin, way wanaagsan yihiin. Waxaan sidoo kale ka helnay deyn ah Deutsche Bank deyn dhan $ 110 milyan oo deyn ah oo loogu talagalay "Sulbeybeyli-Çekmeköy".
ISBEDEL KA DARRIN 25 SANO
Waxaan kajawaabay su'aalaha ku saabsan cilaaqaadka ay la leeyihiin dowladda dhexe ee Yurub. Waxaan fahansanahay in: 25 ay tahay falcelin dabiici ah oo aan looga baran isbadalkan sanado kadib. Waan soo dhoweynayaa tan, laakiin waxaan cadeeyay in waqtigan aan la kordhin.
KU SAABSAN SYRIANS
Qaxootiga Suuriya oo ka mid siyaasadaha Suuriya oo keli ah ka hadlay sida aan Europe tagay dalka Turkiga. Waxaan cadeeyay inay khaldan tahay in laga tago siyaasadaha oo kaliya ma aha magangalyo-doonka laakiin kaliya loogu talagalay socodka wadooyinka loo maleynayo inay yihiin kooxda adduunka ee 2.
20 BILOOD OO BILAASH U BAAHAN
Sababo la xiriira dhibaatooyinka dhaqaale ee Istanbul, 2 waxay u baahan tahay wax ka badan TL 20 bilyan oo loogu talagalay mashaariicda la joojiyay sannado. Tan, 11-12 bilyan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha tareenka ee taagan. IMM waxay hadda leedahay deyn ah bilyan 28 bilyan TL.
GO'AANKA BOĞAZİÇİ wuxuu bilaabi doonaa magaalada Istanbul
Weli wax go'aan ah ma jiro. Waxaa jira qoraallo iyo dareenno. Miis, 3-5 maahan shaqsiga farsamada ee go'aaminta mustaqbalka magaalo weyn oo ah 16 milyan. Inta badan khiyaanooyinka waxaa lagu sameeyay qaabkan. Waxaa naga go'an inaan ka hortagno khiyaanooyinkaas. Qabyo qoraalkaani waa qayb ka mid ah khiyaanada Istanbul. U isticmaal habka iibinta debaajiga sidii habka maalgelinta ee loo yaqaan 'IMM'. Waxaan ka shaqeynaa taas.
WAA INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN
Waxaan aaminsanahay inay maxkamadu ku soo celin doonto qalad, akhlaaq xumida halkan. Waxaan sii wadnaa inaan ku adkeysano inay jiraan aagag xasaasi u ah in loo dhiibo qof aanan garanaynin cidda taariikhi ah.
MAXAAD U BAAHAN YIHIIN INAT DORK AIRPORT
Waxay ka muuqataa wargeysyada qaarkood; Waxay ku sawirayaan dhulka madaarka Atatürk cagaaran. Waxaan sidoo kale jecel nahay. Laakiin waa maxay? Maxaad dooneysaa inaad halkaan sameyso? Waa maxay mashruuca Kanal Istanbul? Kooxaha 20 ee ka shaqeeya arrimo gooni gooni ah ayaa shaqeynaya. Waxa si cad loo sharxi doonaa. Daanyeerka 3 ma ciyaari doono İBB. Dib ugama noqon karo waxyaalaha mar dambe.
ISTANBUL WAA KU SAMEEYSA GURIGII UGU WANAAGSAN
Dhinaca kale, dib-u-dhigis ayaa loo baahan yahay. Maxaa arintan sababay? Waxaan u shaqaynaa xalka. Talaabooyin ayaa la qaadi doonaa si loogu celiyo KİPTAŞ aqoonsigeeda ugu weyn sanad ama labo gudahood.maalin maalmaha)
Waa maxay mashruuca Channel Istanbul